Haweenay Ingiriisa oo cudurka Ibola ka soo qaaday Siiraliyoon oo la sheegayo in xaalkeedu xunyahay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Haweenay Ingiriisa oo cudurka Ibola ka soo qaaday Siiraliyoon oo la sheegayo in xaalkeedu xunyahay
London 05 Jan 2014–Haweenay kalkaaliso ah oo Ingiriisa oo cudurka halista ah ee Ibola ka soo qaaday dalkaasi Siiraliyoon ayaa xaalkeeda lagu tilmaamay mid meel xun maraya. Dhaqaatiirta daawaynaya kalkaalisada ayaa sheegay shalay in xaalkeedu sii xumaaday. Haweenayda ayaa lagu shubey dhiig nin hore uga badbaaday cudurka inkastoo daawo la siiyay isaga ay hadda dhamaatay.
Haweenaydan kalkaalisada ahayd ayaa diyaarad ka soo raacday caasimada dalka fiqiirka ah ee Siiraliyoon waxayna diyaaradu soo martay dalkaasi Marooko hadana waxay u soo duushey madaarka London ee Heathrow waxa hadda dawlada Ingiriisku sheegtay in ay la xiriirtey dhamaan dadkii la socdey diyaaradaas.
Ibola ayaan lahayn wax daawo waxana ilaa hadda la isticmaalaa daawooyin tijaabo ah oo aan la garanayn in ay shaqaynayaan inkastoo hal daawo ah oo shaqaysay ay hadda dhamaatay lana sugayo inta midkale la samaynayo.
Dawlada Ingiriiska ayaa lagu canaantey sida ay ilaa hadda u wado dadka looga shikisan yahay cudurka iyadoo lagu riixayo in ay takoorto dadka cudurka looga shikisan yahay.